Imfuyo iyithinta kanjani imvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinkomo ziyizilwane ezibabazekayo ebesinazo emakhulwini amaningi eminyaka, lapho sizisebenzise futhi sisaqhubeka nokuzisebenzisela ukusetshenziswa ngabantu. Noma kunjalo, Wake wazibuza ukuthi imfuyo iyithinta kanjani imvelo?
Ukuthi impendulo inguyebo noma cha, khona-ke sizophendula lo mbuzo othakazelisayo.
Umkhakha wemfuyo uthinta kakhulu imvelo. Ngokwesifundo se-FAO esihloko sithi »Imfuyo Isithunzi Eside», Ikhiqiza i- 9% isikhutha etholakala emisebenzini yabantu, a 65% i-nitrous oxide, a I-methane engu-37%, futhi Ama-ammonia angama-64%, okufaka isandla ekwenzeni i-acidizing imvula. Lawa magesi awumkhiqizo wobulongwe, amagesi wamathumbu kanye nodoti. Isimo siba sibi njengoba kugawulwa amahlathi namahlathi kube yizindawo ezinotshani zokondla imfuyo. Ngakho-ke, a U-30% wobuso bomhlaba. Kuphela e-Amazon, kubhekwe njengephaphu leplanethi yethu, ama-70% womhlaba asevele esetshenziswa ngabalimi.
Mayelana nenhlabathi, imihlambi yehlisa isithunzi somhlaba, uyihlanganise, uyiqede futhi uyenze ibe yindawo esengozini enkulu yokuba ugwadule. Ngaphezu kwalokho, ama-antibiotic nama-hormone abanikwa wona, kanye nomanyolo kanye nezibulala-zinambuzane ezisetshenziselwa ukufafaza amasimu okusanhlamvu, kufaka isandla ekungcoleni umhlaba nasemkhathini.
Ukufuya okujulile kuphazamisa imijikelezo yamanzi, kunciphise ukushintshwa kwamanzi ezingxenyeni ezingenhla nezangaphakathi zomhlaba. Futhi leyo yinkinga ekhulayo njengoba inani labantu landa. Hlala ukhumbula lokho ukukhiqizwa kwenyama nobisi kubonisa ama-20% we-biomass yasemhlabeni namuhla; Uma inani labantu liqhubeka nokukhula, isidingo sizokhula futhi, ngakho-ke ngaphandle kokuthi kuthathwe izinyathelo, izihlahla nezitshalo kuzoqhubeka nokugawulwa, sikhohlwe noma singafuni ukucabanga ukuthi ngeke siphile ngaphandle komoya-mpilo, kodwa singakwenza lokho ngaphandle kokudla inyama yezinkomo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Imfuyo iyithinta kanjani imvelo?
ungasho kanjani le ndatshana?
valentina daza kusho
bekuyini usuku lokushicilelwa kwalesi sihloko? Ngidinga ukuyicaphuna.
Phendula ku-valentina daza